အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စစ်ဝတ်စုံဖြင့် ကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံ ကြေးသွန်?? - Yangon Media Group
အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စစ်ဝတ်စုံဖြင့် ကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံ ကြေးသွန်??
စကု၊ မေ ၂၁
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးခရိုင် စကုမြို့ အမှတ် (၁) အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်းတွင် နှစ်ထပ်ကျောင်း ဆောင်အသစ်ဆောက်လုပ်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါကျောင်းဆောင်ရှေ့ တွင် လွတ်လပ်ရေးဖခင်၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ စစ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသည့် ကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံတူ ကြေးသွန်းရုပ်တုကို ဇူလိုင် ၁၉ ရက် အာဇာနည်နေ့မတိုင်မီ အပြီးထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်က စကုမြို့တွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ရုပ်တုများထားရှိသည့်နေရာရှိခဲ့ရာ အဆိုပါနေရာတွင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုးဦးတို့၏ ကိုယ်တစ်ပိုင်းကြေးသွန်းရုပ်တုများကို ပြန်လည်ထားရှိနိုင်ရန် စကုမြို့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ကြီးများရုပ်တုဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာလာမည့် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်တွင် မြို့ဂုဏ်ဆောင်အဖြစ် ကြီးကျယ် ခမ်းနားစွာထားရှိ ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့စကုမှာ ဗိုလ် ချုပ်ရုပ်တုစိုက်ထူတာက ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးက ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကမျိုးချစ် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကပြုလုပ်ထားတဲ့ အာဇာနည်ရင် ပြင်ကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်တာပါ။ နောက်တစ်ချက်က ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့စိတ် ဓာတ်မျိုးနောင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေမွေးမြူရမယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ထားရှိတာပါ။ စကုမြို့အာဇာနည် ရင်ပြင်မှာ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကိုးဦးရဲ့ ကိုယ်တစ်ပိုင်းကြေးသွန်း ရုပ်တုတွေထားမှာဖြစ်သလို လူငယ် တွေ အများဆုံးနေ့စဉ်မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ အထက(၁)နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ရဲ့ ရှေ့မှာပါထားရှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု စကုမြို့အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ရုပ်တု ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီနာယက ဦးနေမျိုးကျော်ကပြောကြားသည်။
အထက (၁) နှစ်ထပ်ကျောင်း ဆောင်သစ်ရှေ့တွင်ထားရှိမည့် ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံတူကြေးသွန်းရုပ်တုမှာအမြင့်သုံးပေခွဲရှိမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါကြေးသွန်းရုပ်တုကို ယခုအခါမန္တလေးမြို့တမ္ပဝတီရပ်ပြည့်ဝကြေးသွန်းလုပ်ငန်းမှ မြေထည်ပုံဖော်ပြီးစီးပြီးဖြစ်၍ ဖ ယောင်းကိုင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုလအတွင်းကြေးသွန်းလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ဖလား အုပ်စုတွင်း ပြိုင်ဘက်များကို ကော်ဇော လက်ဆောင် အီရန် ပေးမည်
နေပြည်တော် သပြေကုန်းအဝိုင်းတွင်ထားရှိမည့် အမြင့် ၁၈ ပေ၊ ကြေးတန်ချိန် ခုနစ်တန်ရှိ ဗိုလ်ချု?
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အမှိုက်ကင်းစင်ရေး စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုကို မြို့နယ်အားလုံး လွှမ်း??